RUELLIA: SIFOOYINKA DARYEELKA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Qalabka beeraha, jilicsanaanta ubax-kuleylka ah ee aan kuleylka lahayn waa mid qumman. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa nooca nooca uu yahay, sida ugu wanaagsan ee loo koro iyo nooca daryeelka loo baahan yahay. Ha dhex marin dareenka iyo noocyada ubaxan.
Ruellia ama dipteracantus waa dhirta kulaylka-jecel leh ubaxyo cajiib leh.
Ma taqaanaa? Magacaabida dhirta ee sharaf ka mid ah botaniska dhexe ee Faransiiska Jean Ruel.
Waxay ku koraan dabiiciga ah ee Koonfurta Aasiya, Afrika, tropics-ka Maraykanka iyo subtropics. Ruwe ee ubaxa wuxuu loola jeedaa cirrid acanthus oo waxaa laga helaa geed, geed iyo geedo caadi ah.
Iyada oo iftiiminta ku habboon, waxay Blooms laga bilaabo February ilaa dayrta goor dambe. Iyada oo iftiin aan ku filnayn, muddadani waa mid si xoogan loo yareeyo ilaa saddex bilood. Ruellia waa mid ka mid ah dhirta yar Bloom xilliga jiilaalka - inta kale ee waqtigan waa nasasho.
Waa muhiim! Soo hel dukaanka ubaxa, halkaas oo ay jiraan waxyeelo, adag. Inta badan, tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ubaxa aan inta badan soo iibsaday, laakiin sababta oo ah ubax degdeg ah. Markaad raadineysid, la xariir kaydiyeyaasha gaarka loo leeyahay ama dukaamada khaaska ah.
Ruellia wuxuu leeyahay amar qoys oo dhan 250 nooc. Beeraleydu waxay isticmaalaan noocyo dhawr ah kuwaas oo loo tixgelinayo kuwa ugu caansan koritaanka. Inkastoo ay tani tahay, kala duwanaanshahoodu waa mid aad u ballaaran, iyo dhirta ayaa aan qabin oo aan u baahnayn farsamooyin beerashada gaarka ah, way adagtahay in la helo, qaar kalena waa wax aan macquul aheyn beerta caadiga ah.
Ruelle Britton waxaa loola jeedaa xayiraado dhererkiisu yahay 1 mitir. Saldhigga, afkoda qoryaha, kaas oo u ogolaanaya baadiyaha inay gaaraan cabbirkan. Iyada oo aad u iftiin leh, caleemo ballaaran, caleemo dhaadheer waxay ku qaadataa midab buluug ah. Ubaxyada jilicsan ee noocyada noocan oo kale ah waa kuwo waaweyn.
Ma taqaanaa? Britton waa la kobcin karaa gumeysiyada oo dhan, sababtoo ah xaqiiqda ah in aan la qabin daryeelka iyo dareemo weyn xataa xataa aqalka.
Ruelia DeVosa, ama barafka buluugga ah waxaa badanaa laga helaa kulaylka qoyan ee South America. Jermigu wuxuu koraa ilaa 40 sentimitir. Caleemaha jilicsan ayaa loo qaabeeyey sida kor u kaca ilaa 7 sentimitir dheer. Caleemaha waa madow cagaaran, oo guduudana hoos ugu dhaco xididdada. Ubax kali ah waxay ku jirtaa axil caleemaha. Midabkoodu waa lilac cawlaan leh oo xididdada madow. Isku laab dhar-cad ama buluug ah.
Ruella Portella ee waddanka - Roobabka roobka ee kulaylaha ee Koonfurta Ameerika. Dibadda, waxay u egtahay mid buluug ah. Waxay ka duwan tahay inta badan buugta baaxad weyn oo bunni ah. Ubaxeeda waa casaan cad. Warshad sanadeedka gaarka ah uma baahna.
Rullia grandiflora - geed laba-mitir oo leh ubax badan. Caleenta waaweyn ee muuqaalkeedu wuxuu u eg yahay halbeeg oo leh caarad fiiqan oo koraya ilaa 15 sentimitir. Sidoo kale corolla tubaakadu waa mid cidhiidhi ah. Ubaxadu waxay ku yaalaan dusha sare ee caleemaha. Waxaa laga helaa casaan, lilac, casaan iyo ubaxi karaa xilliga dayrta si ay u helaan iftiin fiican.
Ruellia waa qurux badan - Tani waa warshad qurux badan oo qiyaastii wareegga sanadka oo dhan, si kastaba ha ahaatee, sida intiisa kale ee caanaha ah, ubaxa waxaa lagu hayaa asliga ah kaliya hal maalin. Caleemaha lanceolate waxaa lagu daboolay laawe timewy timo. Qaybta hoose ee caleemaha waa dhalaalaya, iyo dusha sare waa cagaar mataan. Ubax ka sameysan ayaa leh shan faashad. In kastoo ay kala duwanaanta kala duwan tahay, shuruucda daryeelka daryeellayaashu waa isku mid. Iyadoo aan loo eegin ubax aad leedahay, raac iyaga, iyo dhirta ayaa si weyn u eegi doonta, marar dhif ahna jirran.
Xaaladaha ugu wanaagsan ee sii kordhaya
Markaad sii korodho guriga, dadka jecel waxay badanaa iskood u qaadaan daryeel gaar ah oo loogu talagalay xayawaan cusub. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro ka mid ah shuruudaha ugu wanaagsan oo ay muhiim u tahay cimilada dheer ee ubaxyada ee gurigaaga.
Ujeedada wakiillada noocaan ah ee daaqadaha galbeedka iyo bariga ee gurigaaga. Meelaha qolalka, dhirta ayaa sidoo kale kori kartaa, laakiin tani waxay u baahan tahay iftiin gaar ah, sida Rullia jeceshahay iftiin. Beeraha ubaxa waxay isticmaalaan nalal khaas ah si ay u barbar dhigaan wareegga sanadka oo dhan.
Inkastoo xaqiiqda ah in Ruella uu yahay mid fudud, waxaad u baahan tahay inaad ogaato goorta aad joojineyso. Haddii ay dhacdo iftiin aad u dhalaalaya ama qoyaan la'aan, talooyinka caleemaha ayaa bilaabi doona in ay qalalaan, caleemaha waxaa lagu daboolayaa dhibco madow. Xaaladahaas oo kale, cirifka Putin ayaa si dhakhso ah u kobcaya.
Waa muhiim! Caleemaha dhaadheer ee dhuuban, caleenta yaryar iyo ubaxyo yar ayaa ah natiijada nalalka aan ku filneyn.
Waxay u egtahay in ubaxa mar walba la gelin karo xayawaanka daaqadda, oo laftiisa ku raaxeysta iftiinka. Taasi waa joogitaanka iftiinka waa in lagu daro heerkulka qaarkood. U hoggaansamida shuruucda tan waa waajib.
Heerkulka ugu fiicnaanta jabhadu waa Heerka 20-25 ° C laakiin jiilaalka waxay noqon kartaa calaamad la aqbali karo 16-18 ° C. Iska ilaali wareegga hawada, haddii kale waxaa laga yaabaa inay keento jilbis ama xayrta maqaarka.
Marka lagu daro waxyaalahan, waxaa jira tiro balooga ah marka aad guriga ku kortay. Ogaanshaha iyaga, waxaad kori kartaa tijaabada aan ka xuneyn xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo ama aqalka dhirta lagu koriyo.
Daryeelka ubaxa ubaxa ee guriga
Inkasta oo ubaxa uu yahay mid aan hoos u dhicin, waa lagama maarmaan in la adkeeyo qaar ka mid ah xayawaanada qaarkood oo u fiicnaanaya jiritaanka xayawaankaaga cusub.
Waraabinta iyo qoyaanka
Biyaha warshaduhu waa inay noqdaan nidaamsan, laakiin ma ahan kuwa hodan ah. Xaqiiji in ciidda ay ka dillaacaan wax yar oo ka baxsan meelahaas. Si kastaba ha ahaatee, ha ka badin, sida ruxidda loo isticmaalo jawiga qoyan. Haddii caleemaha ay bilaabaan inay u engegaan, isla markiiba biyo waraabi. Xaaladaha markii aysan wakhti dheer lahayn biyo la'aan, waxaa jira fursad kasta oo lagu badbaadinayo. Haddii kale, xitaa qaybaha hoose ayaa dhici doona.
Ruellia wuxuu ku koraa jawiga qoyan, laakiin guriga ma u baahna buufin joogto ah. Waxa ugu muhiimsan waa Ha ku dhejin batariyada iyo kuleyliyaha. Cimilada kulaylka badan waxay keeni kartaa caleenta dhicitaanka. Intaas ka hor, waxay hoos u dhigaan oo duubaan tuubo. Ku waraabinta ubax waxay ku fiican tahay biyaha heerkulka qolka ama in yar oo diiran. Waxay u baahan tahay in lagu quudiyo qaybo kale, joogitaanka taas oo bixin doonta kaliya ciid ah.
Ciid iyo bacriminta
Fikrad u leh beeritaanka si ay isugu darsamaan caleen iyo caleemo, ciid iyo humus, laakiin waxaad isticmaali kartaa carrada caadiga ah ee iibsatay. Ma noqon doonto mid aad u macquul ah in lagu daro vermiculite, wuxuu ciyaari doonaa doorka dheecaanka. Geedku si dhakhso ah ayuu u koraa, sidaas bay u fiican tahay ilaa dhulka. Xilliga xagaaga iyo dayrta, inta lagu jiro ubax, waxaa la quudin karaa bacriminta macdanta laba jeer bishii. Si ubaxa ma aha oo kaliya caafimaad iyo qurux, waxaad u baahan tahay inaad raacdo oo daryeelto muuqaalkeeda.
Si ubaxu u koro si fiican iyo laanta si fiican, Ruelley jiido. Haddii aad rabto in aad ku guuleysato muuqaal qurux badan, waxaad u baahan tahay inaad yareyso caleemaha qaawan. Sidaa darteed, waxay bilaabeysaa inay samayso mid cusub, oo baadiyaha noqotaa midab. Waxaad dhali kartaa geedka cusub, si fudud u gooyaa dusha sare ee jarista. By habka, Grafting waa habka taranta ugu caansan loo isticmaalo by bannaanka ugu.
Transplantation iyo faafin by gooyn
Ubax dadka waaweyn ayaa loo beddelaa sida loo baahan yahay, laakiin dhirta dhalinyarada ah ee nidaamkani waa sanadle. Waxaa ka wanaagsan in laga bilaabo Maarso illaa Maajo. Inta lagu jiro muddadaa waxaa aad u faa'iido leh in lagu daro Bacriminta dhirta ubax ee carrada. Marka dhirta la isku xiro, marka uu jiro hal illaa laba bilood, ku dar bacriminta isku dhafan ee dhirta qurxinta gudaha.
Ruellia waxay leedahay dhawr habab tarin: dhajinta, abuurka, kala qaybinta baadiyaha ama gooynta.
Honeysuckle capillary, plumeria, zamiokulkas, juniper shiinaha, diploadiya, bilberry, boom, koleriya, philodendron iyo ash buur (aronia) ayaa sidoo kale lagu faafiyaa by gooyn.
Haddii aad go'aansato inaad isticmaasho gooynta faafinta ubax, hubso in aysan adageyn. Marka xigta, ku dhaji biyaha ilaa 20 darajo Celsius, iyo marka xididada ay muuqdaan, waxaad ku beeran kartaa ciidda. Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa dheriyo yar oo u baahan in la buuxiyo walxo gaar ah oo ah peat, humus, soodhada iyo caleenta caleenta caleenta.
Qiyaastaasi waxay u fiicnaan doontaa xayawaankaaga waxayna siineysaa dhammaan qaybaha lagama maarmaanka u ah koritaanka guuleysta. Waxaa fiican in la xoqdo guntooda ka hor beerto. Xulo tirada dhirta naftaada, laakiin si aad dhirta uga dhigto mid aad u qurux badan, qaado 5 qaybood. Toddobaadkiiba waxaad u baahan tahay inaad ku quudiso Bacriminta dareeraha si ay geedo u koraan qurux iyo caafimaad.
Ma taqaanaa? Ruellia waxay si qurux badan u soo saartaa gooynta. Iyada oo la kaashanayo samaynta, waxaa suurtagal ah in la cusbooneysiiyo warshad walba sanadkiiba, tanina waxay ka fiicnaan doontaa oo keliya.
Si kastaba ha noqotee, xitaa daryeel wanaagsan waxaa jiraya fursad cudur.
Sidee loola tacaali karaa cudurrada suurtagalka ah iyo cayayaanka
Ruelliumku waa mid u adkaysata cudurrada iyo cayayaanka kala duwan, laakiin waxaa la weerari karaa tiro badan oo ah dulin. Badanaa waxaa jira qaniinyo caaro ah, sababtoo ah waxaa dhacda in ay noqoto daryeel qaldan. Xilliga xagaaga, ubaxa wuxuu saameyn karaa caddaanka. Ha ku degdegin inaad argagaxiso, adoo isticmaalaya sunta cayayaanka, si fudud ayaad u badbaadin kartaa jabhadaada.
Haddii aad leedahay caarada caarada, samee waxyaabahaan soo socda: caleenta ka ilaali biyo qoyan, ka dibna iska tag oo raaci. Waxaa lagama maarmaan ah in caleemuhu ay leeyihiin waqti ay ku daboolaan filim yar oo saafi ah isla markaana gooyaa oksijiinta cayayaanka. Si fiican oo si tartiib ah u dhaq dharka xaydha, ku dabool bac ama meel ku taal aqalka dhirta lagu koriyo, haddii la heli karo. Waxa ugu muhiimsan waa in la abuuro jawi qoyan oo sareeya, cayayaanka weerarka, tani waa dilaa.
Laga soo bilaabo cayayaanka ayaa isticmaali kara "Aktely". Si kastaba ha ahaatee, ku buufin kaliya balakoonka furan ama barxadda - qalabku waa mid aad u sun ah. Meelaha deegaanka ah waxaad isticmaali kartaa "Fitoverm". Ka dib markaad ka shaqeysid, dhaq dharka, maydh, afkana dhaq. Marka la buufinayo microparticles macnaheedu waa inaan heli karo meel kasta.
Waxaa kale oo xiiso leh in wax laga akhriyo cayayaanka kale, laga bilaabo nolosha taas oo ay ku dhacdo tiro badan oo dalagyo ah, kuwaas oo la yiraahdo aphid, wejiga jilicsan, weevil caleenta, nematodes, wireworms, baradhada baradhada Colorado, Hermes, earwig, qashinka dhulka iyo slugs.
Marka laga soo tago kor ku xusan, waxaa jira dhibaatooyin kale. Dadku waxay inta badan weydiinayaan sababta boodhka loo jaray? Tani waa natiijada xaaladaha daryeelka iyo dayactirka aan habboonayn. Geedka wuxuu bilaabaa inuu waxyeelo oo joojiyo ubaxyada. Si kastaba ha noqotee, waa ku filan inaad bedesho shuruudaha iyo dhaawaca waa la bixin karaa.
Haddii aad ka hesho caleemaha cayayaanka, waxaad u baahan doontaa inaad ku dhaqdo xabbad xabbad. Marka xigta, daawee cayayaanka, waxaad dib u soo celin kartaa isla nidaamka todobaadkii.
Si aad quruxdaada uga ilaaliso caddaanka, isku day inaad isticmaasho ribbooyinka dhegaha ah sida dabinka. Haddii aysan suurtagal ahayn in laga hortago cudurka, isticmaal "Actellic" ama "Fitoverm" oo kor ku xusan. Waxay ku habboon yihiin in laga takhaluso cayayaanka badankooda.
Haddii maskaxahaaga uu jiran yahay Fusarium, isticmaal fungicides si aad u daaweyso. Marka cudurkani ka tago marka hore huruud isu beddela, kadibna wuxuu noqdaa buni. Isla mar ahaantaana, nidaamka xididka iyo afkoda waxay bilaabaan inay qudhuntaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad shaqeysid waqtigii loogu talagalay, ka dibna waa laga hortagi karaa cawaaqib xun.
Si kastaba ha ahaatee, ubaxa ma aha mid madaxbannaan oo uma baahna daryeel caafimaad oo adag oo waqti badan ah. Beeraha ubaxa waxay jecel yihiin Ruella si aad u sahlanaato beerashada, iyo sidoo kale sifooyinka bogsashada leh. Kobcinta guriga, waxaad u isticmaali kartaa daaweynta.
Noocyo badan oo jajab ah ayaa ku habboon samaynta daaweynta guriga. Decoction waxaa loo isticmaali karaa isnadaamiska ama cuncunka. Juice si fiican u caawisaa in lagu daaweeyo cudurada dhegaha, iyo caleemaha dhulka ku fiican yihiin boogaha. Carafka qiiqa ka soo baxa caleemaha ayaa ka yareeya madax-xanuun, iyo xididdadu waxay kiciyaan oo ka xumaadaan wax ka badan kafeega.
Waa muhiim! Ha iskaga qaadin iskiis. Casiirka waxaa ku jira sunta sida saponin.
Sida aad arki karto, faa'iidooyinka sii kordhaya ee noocyada noocan ah ayaa ka adkaata dhammaan dhibaatooyinka suurtagalka ah ee aad la kulmi karto. U hubso inaad raacdo dhammaan xeerarka, haddii kale ubaxu wuu dhaawacayaa ama xitaa u dhintaa. Isticmaalka gooynta, waxaad si firfircoon u faafin kartaa geedka iyo, hadday lagama maarmaan noqoto, daawo guriga lagu sameeyo.
Sidee si madaxbannaan u go'aamiyaan kiimikada ee ciidda goobta
Waa maxay isticmaalka dabacasaha jidhka naagta? Xaggee bay khudradda cagaaran ka codsanaysaa?
Hilibka Ostrich: faa'iidooyinka iyo waxyeellada
Halabuurka waxtarka leh, sifooyinka iyo isticmaalka kareemka
Liisaska noocyada waaweyn ee rudbeckia
Noocyo isteroberi ah Siberia
Daroogada "Lozeval" waa qalab loo isticmaalo in lagu daaweeyo shimbiraha, shinnida iyo xayawaanka. Daawada "Loseval": Tilmaamaha "Loseval" waa heterosiklid oo ah triazole oo lagu daro biyo, polietylene oxide, morpholinium / 3-methyl-1,2,4-triazole-5-ylthio / acetate, etonium isku dar ah dimethyl sulfoxide. Read More
Abuurka guriga: khuraafaad ama runtii?
Maxaad caanuhu u leeyihiin dheecaan cad?